Maninona isika no tsy afaka mandray "ilay sambo." - Countdown ho an'ny Fanjakana
Nanome ny lanitra	Luz de Maria de Bonilla	hafatra maromaro momba ny fikasana miafina miafina sy ny fampiasana ny microchip ho an'ny zanak'olombelona. Ireto ambany ireto dia vitsivitsy monja amin'ireo hafatra voarainy. Izy rehetra, ao anatin'izany ny famaritana ny sasany amin'ireo teknolojia ankehitriny izay efa nampiasaina dia hita Eto.
NY MARIA VIRGINY TAHINA
Ny olon'ny Zanako dia mazoto hatrany, mandà tsy hanaiky ny fotoana iainany, ary ny fahavalon'ny fanahy, miaraka amin'ny hafetseny, dia mandray ny zanak'olombelona isak'izay. Ny forongon-teknolojia dia derain'ny ankamaroan'ny zanak'olombelona tsy misy fahalalana sahaza azy. Mampanakaiky ny olona amin'ny fanekena izany ary tsy misy fiheverana ny zava-baovao teknolojia. Amin'izany ny zanak'olombelona dia handray ny fampiasana ny microchip amin'ny fahatokisan-tena lehibe, ity fitaovana malina sy miniscule ity no mpanamory lehibe indrindra nisy hatrizay.
Amin'ny alàlan'ny microchip, dia ho foana ny eritreritry ny olona, ​​ary ny fahalalahana nomen'ny Zanako ny olona dia horaisina an-keriny. Ny microchip dia famantarana lehibe alohan'ny fisehoan'ny besinimaro ny antikristy.
Ray aman-dreny: anjakan'ny teknolojia ny demonia. Ny zava-baovao apetrakao eo am-pelatanan'ny zanakao dia tetika efa nomanina mba hampiasan'ny zanakao ny microchip ary ho lasa mpivavaka amin'ny antikristy. Ho tonga zavaboary banga ny zanakao, vokarin'ny teknolojia noforonina hanjakazakan'ny olombelona.
KRISTY JESOA Tompontsika
Aza avela hanisy tombo-kase anao izy ireo. Aza avela hanao tombo-kase anao amin'ny microchip izy ireo amin'ny toe-javatra mety hisy. Hikarakara ny oloko aho, hikarakara ny mpino ahy aho. Tahaka ny famelomako ny vorona any an-tsaha, dia toy izany no hikarakarako ny oloko mahatoky.
Tsy tokony avelanao hampiharina amin'ny vatan'olombelona ny microchip. Manàna finoana fa na ny Zanako lahy na Izaho tsy hamela ny vahoaka mahatoky hirohotra amin'ny fitaky ny hetahetan'ny antikristy izay mandeha an-kalalahana mamakivaky an'i Eropa, sahy hiditra na dia ny tranon'ny Zanako aza.
Tsy manafina amin'izy ireo aho fa ny mosary dia ho tsapa manerana an'izao tontolo izao: ny manan-karena sy ny mahantra hijaly amin'ny hanoanana, ny vola tsy ho fitaovana hividianana sakafo, fitafiana na fanafody. Manoloana ny toekarena latsaka dia tsy hisy na inona na inona manan-kery ho an'ny fiveloman'olombelona raha tsy efa miomana hametraka amin'ny vatanao ny tombo-kasen'ilay bibidia izy ireo, ny microchip, izay angatahin'ireo mpitondra firenena amin'ny olony mba hatolotra azy ireo eo an-tanan'ny ny antikristy.
Ho tonga haingana ny vola manerantany, miaraka amin'ny governemanta hametraka ny microchip amin'ny mponina ao aminy. Hijaly noho izany ny zanako. Aza hadinoinao fa ny sakafon'ny vorona omeko, toy ny sakafo ho an'ny oloko dia avy amin'ny tanako.
Amin'ity vanim-potoana teknolojia iainan'ny zanak'olombelona ity dia nitaona ny olona izy ireo hijery ny puce natsangana ho toy ny mahazatra, saingy tsy tokony hanaiky izany ny zanako. Izy io dia famantarana ny bibi-dia izay hanandevozanareo azy.
Ry malala, tsy ho ela izy ireo dia hanomboka amin'ny adidy sy ny fampiharana ny microchip ka samy hanaiky izany ianareo tsirairay avy. Fantatr'izy ireo tsara fa izany no tombo-kasen'i satana, izay tsy hanarahan'izy ireo ny dian-tongony fotsiny sy hifehezany ny fiainam-piaraha-monina anananao, fa ny lafiny ara-toekarena anao koa, hifehezana ny sainao, ka na dia te-hanana ao anatiny aza ianao dia tsy afaka mamoaka vavam-bavaka tokana, tsy ho afaka hangataka fanampiana amin'ny Zanako akory ianao. (Apok. 13: 16-17)
«Nanolotra ny tenanao ho amin'ny ratsy ianao. . . mametraka ny tenanao ho eo an-tanan'ny ratsy ianao. Impiry aho no nampandre anao momba ilay iray izay handray ny olombelona sy hibaiko anao! … Manantena lehilahy ianao… Fa miaraka aminao mandritra ny andro izy. Mampiharihary ny angon-drakitra akaiky anao ianao, manala sarona ny fianakavianao. Nomenao ny fibaikoana ny asanao sy ny fihetsikao amin'ireo manodinkodina fahefana amin'ny anaran'ny ratsy. Niditra tamin'ny haitao diso tafahoatra ianao. Mampiharihary ny angonao manokana sy ny hetsika rehetra eo amin'ny fiainana amin'ny media sosialy ianao. Tsy ilaina ny miandry ny microchip ho voafehy; Izy ireo dia efa mifehy anao ary amin'ny alàlan'izany dia avelao izy ireo hanaiky ny hamehezana anao amin'ny microchip. "
Miatrika fandrahonana lehibe ny olon'ny Zanako… Ny microchip dia ny fitakian'ny demonia amin'ny olona sy ny fanahin'ny zavaboary. Ny sasany nijery azy lavitra na nofinofy fotsiny, fa ny fametrahana ny microchip dia zava-misy izay haorina tsy ho ela.
Ny politika dia endrika fiereny miafina, ary hiseho tampoka ilay microchip, manodidina ny Tanànan'ny Zanako. Hianjera ny toekarena manerantany, ary amin'ny alalany no hisehoan'ny governemanta ratsy mba hanjakazakana ny zanak'olombelona.
I Satana dia hanafika ny olona izay tsy mahafehy ny olombelona: ho simba ny toekarena, ary ny fianjerana ankapobeny dia hanomboka amin'ny sehatra manerantany, ary ireo izay tsy matanjaka ara-panahy dia hanome ny ainy ho amin'ny ratsy ho takalon'ny fiarovana ara-toekarena diso nomen'ny microchip; ary ny sasany kosa hamarana ny fiainany noho ny vola.
Mandroso tsy misy indrafo eto an-tany ny haizina ary hanohy hanelingelina ny sain'ny olona ity haizina ity amin'ny fomba tsy hiheveran'ny olombelona intsony. Izy dia hibaiko amin'ny microchip tsotra fotsiny izay hanova azy ho olona tsy mananaina, ary toy ny saribakoly dia hampiasan'ny lehibe sy mahery izy.
Ka noho ny finoana ny Teniko dia aza avela ny tenanareo, ry mpino ahy, hampidirina amin'ny microchip izay hiparitaka manerana ireo firenena isan-karazany miaraka maika. Tsarovy fa ny mana ko dia avy amin'ny tranoko, satria mahatoky amin'ny oloko aho, raha mahatoky amiko ny oloko.
Posted in Luz de Maria de Bonilla, Messages, Ny vanim-potoana amin'ny Anti-Kristy, Fotoan'ny fitsangatsanganana.
← Gisella Cardia - Ankehitriny…
Angela - Fotoana sarotra miandry anao →